३ वर्षिया बालीकालाई समेत छोडेन बलात्कारीले, दोलखामा बढ्दै छ बलात्कारका घटना
यहि कात्तिक २५ गतेको बिहानी १८ वर्षिया एक युवतिका लागी कहाली लाग्दो क्षण बन्यो । दोलखाको दक्षिणी मिर्गे गाविस स्थित छिमेकीको घरमा लगाइएको सत्य नारायण पुजामा आमा र बाबा सँगै कात्तिक २४ गते बेलुका गएकी १८ वर्षिया युवतिले आफु माथि यत्ति ठुलो विपत्ति आइपर्ला भनेर कहिल्यै कल्पना गरेकी थिइनन् ।
कल्पना गरोस पनि कसरी ? यस्तो कल्पना एक महिलाले सपनामा समेत देख्न चाहदिनन् । पुजा चलिरहेको थियो । बिहान करिव ४ बजे युवतिकी आमा र बाबा पुजामा व्यस्त भएका बेला युवतिलाई एक पुरुषले जबरजस्ती उठाएर नजिकैको कोदोबारीमा लगी बलात्कार गरे । उनलाई बलात्कार गर्ने नाम्दु गाविस वडा नम्बर ४ बस्ने २४ वर्षिया गुन्जे नेपाली समेत सत्य नारायण पुजाको निम्तो मान्न आएका थिए ।
छोरी पुजा स्थलमा नभेटिए पछि खोजी गरीयो, छोरी फेला त परीन् तर कोदोवारीमा चिच्याई रोई कराई गरी रहेको अवस्थामा । अभिभावकको उजुरी पछि बलात्कारमा संलग्न रहेका नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । दोलखामा दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटनामा वृद्धि भइरहेका छन् । यो भनाईलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको तथ्यांकले समेत स्पष्ट पार्छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखी चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिना सम्म ३३ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी प्रवक्ता एवम् प्रहरी निरीक्षक विनोद कुमार सुनुवार भन्नुहुन्छ, दोलखामा अन्य आपराधिक घटनाको तुलनामा बलात्कारका घटना ह्वात्तै बढेको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा ८ वटा बलात्कारको घटना भएकोमा घटनामा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत दोलखाले पुर्पक्षका लागी थुनामा पठाएको छ भने दुई जना अझै फरार छन् । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ७ वटा बलात्कारको घटना भएकामा ६ जनालाई पक्राउ गरीएको थियो । अहिले उनिहरु पुर्पक्षका लागी थुनामा छन् । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा बलात्कारको घटनामा कमी आएको देखीन्छ ।
तर आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा भने बलात्कारको घटना अनेपेक्षित रुपमा बढेको छ । प्रहरी निरीक्षक सुनुवार भन्नुहुन्छ, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा दोव्वर नै वृद्धि भएको देखिन्छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७ वटा मात्रै घटना भएकामा यो वर्ष १४ वटा बलाात्कारका घटना भए । यो वर्ष ३ वर्ष देखी १६ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका बालिका बलात्कारीका शिकार भएका छन् । सोहि वर्ष एक युवति माथी सामुहिक बलात्कार समेत भएको थियो । १४ वटा घटनामा संलग्न रहेका मध्य १७ जना पक्राउ परे भने दुई मुद्धाका दुई जना अभियुक्त अझै फरार छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को ४ महिनाको अवधिमा ४ वटै बलात्कारका घटना भएका छन् । जसमा २ वटा घटनामा ६ वर्षिया बालीकालाई १३ वर्षको बालक र ८ वर्षिया बालीकालाई १८ वर्षिया पुरुषले बलात्कार गरेको छ । घटनामा संलग्न रहेका १३ वर्षिया बालकले निलो चलचित्र हेरे पछि सोहि दृश्यको सिको गर्दै बालीकालाई खाने कुरा दिई फकाएर बलात्कार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । चालु वर्ष बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना बालकलाई सुधार गृह पठाइएको, दुई जना पुर्पक्षका लागी थुनामा गएका छन् भने एउटा मुद्धा माथी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक सुनुवारले जानकारी दिनुभयो ।
३ वर्षिया बालीका समेत भइन बलात्कारीको शिकार
दोलखाको उत्तरी गाविसको एक घरमा साँझको समयमा ३ वर्षिया बालीका छिमेकी १३ वर्षको बालक सहित टिभि हेर्दै थिईन । त्यस बेला बालीकाको अभिभावक कोहि पनि थिएनन् । अचानक बत्ति गए पछि उनै १३ वर्षिया बालकले ३ वर्षिया बालीकालाई छिमेकीको घरको पिढिमा लगी बलात्कार गरे । बालकलाई सुधार गृह पठाइएको छ ।
किन बढ्यो बलात्कारका घटना ?
जिल्ल प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी निरीक्षक विनोद कुमार सुनुवार भन्नुहन्छ, गरिवी, बेरोजगारी, युवामा बढ्दो यौन इच्छा प्रविधिको बिकास, इन्टरनेटको तथा निलो चलचित्रको सजिलो पंहुच, कानुनको अज्ञानता तथा सचेतनाको कमि आदि कारणबाट यस्ता घटनामा वृद्धि भएको हो, अहिले सम्म गरीएको अनुसन्धानबाट मोबाइलमा अश्लिल तस्विर खिची सामाजिक सञ्जालमा राखिदिन्छु भन्दै धम्क्याएर समेत बलात्कार गर्ने गरेको पाएका छौ ।
दोलखामा छैन बाल सुधार गृह र महिला सुरक्षित गृह
कलिला उमेरका बालकले कुनै पनि किसीमको अपराध गरेमा उसलाई बाल सुधार गृह पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर दोलखामा बाल सुधार गृह छैन । जसले गर्दा अपराधमा संलग्न भएका बालकलाई राख्नका लागी विभिन्न ठाउँ चहार्नुपर्ने बाध्यता छ । यसैगरी हिंसाबाट प्रभावित तथा विभिन्न समस्यामा परेका महिला तथा बालीकालाई आश्रय दिने थलो महिला सुरक्षित गृहको व्यवस्था समेत दोलखामा छैन । महिला तथा बालबालीका कार्यालय दोलखाकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत लक्ष्मी ढकाल भन्नुहुन्छ, अहिले युएनएफपिए नामक गैह्रसरकारी संस्थाको सहयोगमा स्थानीय संस्था आवाज नेपालले सञ्चालन गरीरहेको स्नेह केन्द्रमा हामीले त्यस्ता महिला तथा बालीकालाई राखीरहेका छौ, यो सहयोग पनि डिसेम्बर महिनामा सकिदै छ, त्यस पश्चात कसरी अघि बढ्ने अहिले सम्म यकिन भएको छैन । दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको आपराधिक घटनामा धेरै महिला तथा बालीका असुरक्षित हुँदै गइरहेको अवस्थामा उनिहरुलाई राख्नकै लागी सुरक्षित गृह नहँुदा समस्या परेको हो ।
बढ्दै छन् उजुरीकर्ता
पहिला पहिला बलात्कारका घटना भए बेइज्जत हुने डर, इज्जत मान प्रतिष्ठामा आउन सक्ने आँच र बलात्कारीकै धम्किकै भरमा पिडित परिवारले अन्याय सहनु पर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले पिडित परीवारकै सदस्य खुलेर प्रहरी सम्म आएर उजुरी दिने गर्छन् । एकातर्फ मुलुकी ऐन २०२० जवरजस्ती करणीको महलमा उजुरी गर्ने हदम्याद ३५ दिन रहेकामा २०७२ असोज १४ को संशोधनबाट ६ महिना गरिएकाले र अर्को तर्फ महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा अपराधका सम्बन्धमा काम गर्ने संघ संस्था निकायको सकृयताका कारणबाट यस्ता प्रकृतिका घटनाहरुको बारेमा उजुरी समेत बढेको हो ।